Hiran State - News: HS:-Al Shabaab oo nin oday ah oo ay mudo heysteen sii daayey
HS:-Al Shabaab oo nin oday ah oo ay mudo heysteen sii daayey
HS:-Al-Shabaab Oo Nin Odey Dhaqameed Ah Oo B/Burte Aay Ku Heysteen 5-Todobaad Sii Daayay
B/Burte: HN: Wararka ka imaanaya magaalada Buulo Burte ayaa sheegaya in kooxda A-shabaab ee ka talisa magaaladaasi aay baabuur kala dageen oday muctarif ah oo laga yaqaano gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada B/weyne.
Odeygan oo lagu magacaabo Aden Xasan ayaa waxaa baabuur uu saarnaa kala dagay kooxdan kadib markii uu ka soo safray magaalada B/weyne isagoona ku sii jeeday magaalada Muqdisho si uu xanuuno hayay isaga daweeyo.
Odeyga oo aan la garaneyn sababta aay u heysteen, ayaa la sheegayaa in uu aad u xanuusanayo isagoo welibana qabo cudurka kaadi macaanka.
Warar hoose oo Hiiraan Net heshay ayaa sheegaya in madaxa Al-shabaab ee gobolka Hiiraan Yusuf C. Ugaas Muumin Warfaa uu si shaqsiyan ah ugu dheganaa mudo 5-todobaad ah odeygan, iyadoon la garaneyn waxa uu ka haleeyey, dad badan oo odayaal ah oo isku deyey in la soo deeyo odeyga ayaa dhowr jeer oo hore ku guul dareystay, walow markii dambe si dirqi ah looga soo fur furay, iyadoo la leeyahay waxaa loo maray madax kale oo ka sareysa horjoogahan kuwaasoo markaa ku sugnaa magaalada Jowhar. kadibna amar aay soo bixiyeen horjoogayaasha kale ee markaa Jowhar joogay lagu sii daayay.
Oday dhaqameedka oo 80-jir ah ayaa dadku la yaabeen waxa Al-shabaab aay u heysteen mudadaas dheer, weliba isagoo B/weyne ku noolaa xiligii Al-shabaab aay halkaa ka talinayeen, wax dhibaatana uusan ku qabin.
Horjoogaha gobolka Hiiraan Yusuf Cali Ugaas ayaa ku nisboobay inuu indhaha tiro gobolka uu ka soo jeedo ee Hiiraan gaar ahaan qabiilkiisa Xawaadle iyadoo amar uu ka soo qaato dadyow kale oo aan gobolka u dhalana uu fuliyo, waxaana madaxiisa ku dhintay boqolaal isugu jira aqoonyahan iyo waxgarad, isagoo intii soo hartayna ka dhigay kuwo ka qaxa dhulka Hiiraan.
Odeyga ayaa hada wuxuu ku sugan yahay magaalada B/weyne halkaas oo uu markii hore ka safray, waxaana la sheegayaa in diif iyo daal badani ka muuqdo, laakiin xaaladiisa guud aay fiican tahay.
Xigasho Hiiraan Net
· admin on August 15 2012 05:54:59 · 0 Comments · 2018 Reads ·
14,581,407 unique visits